Mafashama | Network Meteorology
Imwe yemhedzisiro inokuvadza yemvura ndeye mafashama, sezvo vachibvisa zvese zviri munzira yavo. Miti, dzimba, migwagwa uye yakareba nezvimwe. Nechikonzero ichi, chiitiko ichi chechisikigo ndechimwe cheanotyisa munharaunda, nekuti mvura iyo yaanopfuura nayo nesimba inoparadza.
Mune ino nzvimbo iwe unowana zvese zvine chekuita nemafashama izvo dzimwe nguva zvinokanganisa vanhu vese nemaguta. Iyo yekupedzisira awa maererano nenjodzi dzemaitiro aya pasirese. Dhata, zvinokuvadza uye vanhu vasipo kuti vakuchengete iwe uzive nezve zvese zvinobata imwe neimwe enclave.
Mafashama eGerman akunda nhau dzese nhasi. Uye hazvisi zvishoma ...
Chii chinonzi mafashama?
kubudikidza Monica sanchez inoita 3 makore .
Mvura, munzvimbo zhinji dzepasi, inogamuchirwa, asi kana mvura ichidonha nesimba guru kana panguva ...
Mafashama anozokuvadza mamirioni avanhu mukati memakore makumi maviri nemashanu
Mafashama zviitiko zvemamiriro ekunze izvo isu tichafanirwa kujairira. Zvinoenderana nechidzidzo chakaburitswa mumagazini Sayenzi ...
Tsunami inogadzira sei uye chii chatinofanira kuita?
kubudikidza ChiGerman Portillo inoita 4 makore .
Takanzwa nezve tsunami kakawanda. Aya mafungu ekudengenyeka kwenyika akatanga neakateedzana mafungu mahombe anobva ...
Dutu rinosiya kukuvara kwakawanda uye kufa kwevanhu vaviri muMurcia neAlicante
kubudikidza ChiGerman Portillo inoita 5 makore .
Mvura nemhepo zviri kukanganisa iyo yese yekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweIberian Peninsula neBalearic Islands ...
MIFANANIDZO NEVHIDHIYO: Dutu rine mvura rinokonzera njodzi muSpain
kubudikidza Monica sanchez inoita 5 makore .
Nezuro raive zuva ratisingazokanganwe nyore. Kunaya kwemvura inopfuura 120l / m2 kwasiya yakawanda yemigwagwa mukati mese kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva ...
Kuwedzera kusimbiswa kwekudzivirira zvinokonzerwa nemafashama
Andalusia yakakanganiswa nemafashama anotyisa nekuda kwekunaya kwakanyanya kunaya mumazuva apfuura. Naizvozvo…
Kukuvara kwakawanda uye kubuda nekuda kwemvura zhinji
Tichifunga nezve mafungire emamiriro ekunze akaitwa mumazuva apfuura, gumi nerimwe mapurovhinzi eSpain akaudzwa nevakasimba ...
Chii chinonzi mafashama
kubudikidza Monica sanchez inoita 6 makore .
Unogona kunge wakamboenda kunzvimbo yaive nemafashama. Kwandinogara munaNovember 2013 takaita ...